Qaabkee Ayuu U Dhacay Loolankii Saaka Ee Hawadu ? | Baligubadlemedia.com
Qaabkee Ayuu U Dhacay Loolankii Saaka Ee Hawadu ?
Laamaha hawada Somaliland, Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa saaka(21 March 2020) isugu xoog sheegtay hawada kadib markii lagu loolamay diyaaradda Ethiopian Airline oo ka soo duushay magaalada Addis Ababa kuna soo jeeday magaalada Hargeysa.
Diyaaradda oo ku soo jeeda magaalada Hargeysa ayaa la sheegay in ay la xidhiidhay laanta duulimaadyada ee Soomaaliya una sheegtay in ay dib uga noqoto hawada Somaliland una hoggaansanto amarkii Soomaaliya ku joojisay diyaaradaha. Diyaaradda Ethiopian Airline ayaa cabbaar warwareegaysay hawada Itoobiya ee u dhaw xuduudka Somaliland kadib markii sida la sheegay maamulka Hawada ee Itoobiya ku wargeliyay in aanay ku noqon madaarka ay ka soo duushay ee Addis Ababa.
Hase ahaatee maamulka hawada ee Somaliland ayaa isna dadaal u galay sidii ay diyaaraddaasi uga soo degi lahayd Hargeysa.
Warbaahinta Somalilanchronicle oo soo xiganayso ila wareedyo ka mid ah hay’adda duulimaadyada Somaliland iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in maareeyaha hay’adda duulista Somaliland Duuliye sare Rodol si toos ah ula hadlay Pilot-ka waday diyaaradda, islamarkaana ku boorriyay in uu soo dejiyo diyaaradda sidaasna ay ku soo fadhiisatay.
Dhinaca Soomaaliya waxaa ka soo baxay warar is khilaafsan oo ku saabsan arrintan. Markii diyaaradda Itoobiya si toos ah ugu soo jehaysatay magaalada Hargeysa waxa warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda duulista Soomaaliya oo sheegtay in ay muddo labo cisho ah fasaxday hawada Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland, halka wasiirka duulista Soomaaliya sheegay in ay habeennimadii xalay fasaxeen hawada mana sheegin sababta xannibtay diyaaradda Itoobiya ee muddada meeraysanaysay hawada Itoobiya ee xuduudka Somaliland u dhaw.
Xilligan oo ay Dunidu la tacaalayso xanuunka COVID 19 iyo feeraska dhaliya ee Coronavirus ayay u muuqata in siyaasadda Somaliland iyo Soomaaliya cirka isku shareertay kadib loolanka dhanka maamulka hawada ee labada dhinac.